सेयर बजार Archives ~ Page 20 of 149 ~ Banking Khabar
साढे तीन अंकले परिसूचक घट्दा कारोबारमा पनि गिरावट
सोमबार सेयर बजार ३.५१ अंकले घटेर १५३६.७२ अंकमा कायम भएको छ । जलविद्युत् समूह ७.६१ अंकले बढ्दा बैंकिङ, व्यापार, होटल, विकास बैंक, फाइनान्स, बीमा, उत्पादनमूलक र अन्य समूह क्रमशः १.३६, ५.९१, २.१२, १२.८३, २.३२, ३१.७८, ९ र २.८९ अंकले घटेका …
डिम्याट खाताका फाइदाहरु चार बुँदामा
डिम्याट प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताहरुले सेयर खरिद गर्दा कागजी प्रमाणपत्र नभइ ईलेक्ट्रोनिक सेयर आफ्नो खातामा प्राप्त गर्नेछन् । तर डिम्याट प्रणाली अन्तर्गत कारोबार गर्नपुर्व लगानीकर्ताले डिपी (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स) मा गएर डिम्याट खाता खोल्नु आवश्यक छ । आफ्नो खातामा कुन कम्पनीको के …
२० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्दै ‘मुक्तिनाथ विकास बैंक’, चुक्तापुँजी अढाई अर्ब नाघ्ने
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका सेयरधनीले २१.०५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । बैंकको बैंकको कात्तिक ८ गते बसेको संचालक समितिको १८१औँ बैठकले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने …
दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार, ५० करोडको कारोबार
गत सातादेखि नै ओरालो लागिरहेको सेयर बजारले यो साताको सुरुवात पनि गिरावटबाटै गरेको छ । नेप्से परिसूचक १३.३९ अंकले घटेर १५४०.२३ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार भएका सबै समूह ओरालो लागेका छन् । बैंकिङ, व्यापार, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत्, …
कसरी किन्ने जनता बैंकको सेयर ?
जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले ८५ हजार एक कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । बैंक्ले प्रचलित कानुन विपरित गुरु प्रसाद न्यौपानेले किनेको सेयर जफत गरी लिलामीमार्फत विक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने उक्त सेयरमा यही कात्तिक …
साताको सेयर बजार : चार दिनमा १४.६३ अंकको गिरावट
तिहार विदापछि खुलेको सेयर बजार पहिलो दिन सामान्य बढेपनि पछिल्लो तीन दिन नै लगातार रुपमा घटेको छ । आइतबार ३.५७ अंकले बढेको बजार सोमबार, मंगलबार र बुधबार क्रमशः ३.६२, ०.६६ र १३.९२ अंकले घटेर १५५३.७२ अंकमा कायम भएको छ । …
१५५३.७२ अंकमा झर्यो सेयर बजार, ४७ करोडको कारोबार
बुधबार पनि सेयर बजारमा गिरावटको क्रम रोकिएको छैन । सोमबारदेखि निरन्तर घटिरहेको बजार बुधबार १३.९२ अंकले घटेर १५५३.७२ अंकमा कायम भएको छ । व्यापार र होटल समूह क्रमशः ११.७३ र ३१.३५ अंकले बढेका छन् भने बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स, …
भार्गव विकास बैंकको सेयर छ ? कात्तिक २४ गतेदेखि आउँदैछ हकप्रद
बैंकिङ खबर । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडले यही कात्तिक २४ गतेदेखि ८० प्रतिशत अर्थात १० बराबर आठको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको २१ लाख १२ हजार …
जनता बैंकमा लगानी गर्ने अवसर, ८५ हजार कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा आउँदै
बैंकिङ खबर । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले ८५ हजार एक कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । बैंक्ले प्रचलित कानुन विपरित गुरु प्रसाद न्यौपानेले किनेको सेयर जफत गरी लिलामीमार्फत विक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने उक्त सेयरमा …
राधी विद्युत् कम्पनीको आईपिओ आउँदै, धितोपत्र बोर्डले दियो अनुमति
बैंकिङ खबर । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सात करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सात लाख ६४ हजार पाँच सय ५० …